Our Service | Jewel Ko Lay Co., Ltd | JKL Print | hologram | Graphic Design
Special Services of ACTIVE TECHNOENTREPRENEURS
Direct Creator , Design Specialist , Modern Offset , Holographic Lamination , Hot Stampting , Diecutting & Binding
Modearn – ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း ၊ အဆင့်မြင့် – စက်ကြီးများနှင့် ပုံနှိပ် ၊ ဖေါင်းကြွ ၊ ရွှေငွေစက်ဖိ ၊ ခေတ်မီ စက္ကူဖြတ်စက်များ သုံးစွဲလျက် ၊ (စာအုပ်ချူပ်၊ ကော်ကပ် ကော်တွဲ ၊ ပြက္ခဒိန်ချူပ်လုပ် ဖြတ်တောက်ခြင်း) နှင့် သေသပ်လှပစွာ ထုပ်ပိုး၍ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော RF အလုပ်ရုံ ၊ စက်ရုံကြီးမှ ကြိုဆိုကမ်းလှမ်းနေသည် ဖြစ်ပါ၍ ဈေးနှုန်းချိူ သာခြင်း ၊ မြန်ဆန်လှပ သေသပ်တိကျခြင်း ၊ နှစ်ပေါင်းကြာရှည်စွာ ယုံကြည်စိတ်ချ အလုပ်အပ်နိုင်ခြင်း စသည် စိတ်ချမ်းသာမှုများ ရရှိမည့်အပြင် မိတ်ဆွေများ၏ ရှေ့ဆက်ရမည့် လုပ်ငန်းများတွင် တစိတ်တပိုင်း အဖြစ် အတူတကွ ပံ့ပိုးနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ သို့ပါ၍
JKL GRAPHIC DESIGN
ROYAL FLOWER GENERAL PRINTING & PACKAGING,
JKL LASER HOLOGRAPHIC LAMINATION AND FILM နွင္႔
TOP SECURITY LOGO SEALS သို့
ယုံကြည် စိတ်ချစွာ အလုပ်အပ်နှံပါ။
The Value Customer များအတွက် ပုံနှိပ်မှု အလုပ်သစ်တိုင်းတွင် ရွက်ရေ (၅၀၀၀)ကျော် လျှင်
– Commercial Photos.
– Computer graphic Design.
Royal Flower ( General Printing & Packaging )
တိုးတက်အောင်မြင်လိုတဲ့ ထုတ်ကုန် လုပ်ငန်းရှင်များ နှင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ အတွက် ခေတ်မီ ဆန်းသစ်တဲ့ Idea ဒီဇိုင်း နှင့် အဆင့်မြင့် ပုံနှိုပ်မှု အစုစုများကို ပြီးပြည့်စုံစွာ ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ Royal Flower မှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုလျှက်……
ကျွန်တော်များ Royal Flower ( General Printing & Packaging ) , JKL Co.,Ltd. ပုံနှိပ် လုပ်ငန်းစုမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ၊ ထုတ်ကုန် လုပ်ငန်းရှင် ၊ မိတ်ဆွေများအတွက် အောက်ပါ ဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် လှိုက်လှဲ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါသည်။
** ပြက္ခဒိန် 20″ x 30″ Poster အသေး/အကြီး၊ Company Profile, Catalog, Pamphlet လက်ကမ်းကြော်ငြာ အမျိုးမျိုး၊ စက္ကူ / စတစ်ကာ တံဆိပ် အလုံးစုံ၊ (အဆင့်မြင့် မုန့်ဘူး အလှကုန်ဘူး/ အထည်အလိပ်ဘူး) စက္ကူဂျပ်ဘူး (ပျော့/မာ) Size အကြီး / အသေးအစုံ၊ အရောင်းဘောက်ခြာ Carbonless, Business cards, Letter head, Envelope , etc.
– Warranty Seal & Packaging
– Brand Authentication
– Increasing Brand Image
– Image Awareness.
– Value added.
– Promotion , etc.